Woyisondeza - Xhosa - Anglais Traduction et exemples
Vous avez cherché: woyisondeza (Xhosa - Anglais)
Ke ukuba umsondezo wakhe uyibhokhwe, woyisondeza phambi koYehova,
agqibe ukuyicamagushela ingcwele nentente yokuhlangana, nesibingelelo. Woyisondeza inkunzi yebhokhwe ephilileyo,
Woyisondeza uAron inkunzi entsha yenkomo yedini lesono elilelakhe, azicamagushele okwakhe nokwendlu yakhe.
Yonke imisondezo eyiminikelo yakho yokudla woyigalela ityuwa; uze umgavumi ukuba isweleke ityuwa yomnqophiso woThixo wakho eminikelweni yakho yokudla. Imisondezo yakho yonke woyisondeza inetyuwa.
kinakahiya ka (Tagalog>Anglais)os bts sou sua fã (Portugais>Anglais)anastasia (Espagnol>Suédois)hinubaran ng suot na damit (Tagalog>Anglais)ahso (Allemand>Anglais)surrexit dominus (Latin>Allemand)jacky ist nicht gut in der schule lol (Allemand>Albanais)夏野我想想 (Chinois (simplifié)>Espagnol)and u (Anglais>Grec)on or before this date in tagalog (Anglais>Tagalog)askorbiinihapolle (Finnois>Slovaque)ano ang kahulugan ng naninimdim (Tagalog>Anglais)camosci (Italien>Japonais)subong ilonggo to tagalog (Tagalog>Anglais)kahulugan ng sisilain sa tagalog (Tagalog>Anglais)meningkatkan suhu (Malais>Chinois (simplifié))mukha kang mabait (Tagalog>Anglais)root chord (Anglais>Espagnol)i got your back (Anglais>Hindi)blu film video (Hindi>Arabe)maksud j (Indonésien>Malais)affrmetiva वह खेलता है (Hindi>Anglais)sarjana perikanan (Indonésien>Anglais)pati ne pizza banaya mere liye (Hindi>Anglais)宽大的 (Chinois (simplifié)>Azerbaïdjanais)